Thumela ngePubPub - AfricArXiv
Uma usebenze, njengamanje usebenza, noma uhlose ukusebenza ocwaningweni oluphathelene nobhubhane lwe-coronavirus futhi ungathanda ukwenza isethulo, sicela ulandele imiyalo engezansi.
1. Ukuqopha ividiyo yakho
Sicela ubheke ukutholwa okuthile noma iphuzu locwaningo.
Yisho igama lakho, izinhlangano zakho, isiyalo kanye nezwe lakho.
Xoxa ngolwazi olufanele olutholile noma onethemba lokuluthola ngomsebenzi wakho, okubandakanya indlela yokusebenza nezindlela zesayensi.
Yenza iziphakamiso ezivela eziphethweni zakho noma ekubukweni kwakho. Uma kungenzeka, sicela ufake futhi ukuthi ngubani ozothola lo msebenzi efaneleke kakhulu (ezinye izindawo zocwaningo noma umsebenzi oqhubekayo, ukusebenzisana okungenzeka).
Yisho izikhombo ezintathu kuya kweziyi-3, kubandakanya nezakho. Sicela unikele ngolwazi olwanele (amagama abalobi, unyaka wokushicilela, isihloko samaphephabhuku, isihloko se-athikili) ukuze ireferensi itholwe yiqembu lethu. Uma kunokwenzeka engeza i-doi efanele kwifomu lokuhambisa.
Yisho ukuthi uyavuma ukwaba lokhu kuqoshwa ngaphansi kwe Ilayisense le-CC-BY.
2. Ukuhambisa ukuqoshwa kwakho
Sicela usebenzise leli fomu. Qiniseka ukuthi ugcwalisa zonke izinkambu ezidingekayo bese ulayisha okurekhodile. Uma unemibuzo noma inkathazo, sicela uthumele i-imeyili ku: info@africarxiv.org
Sicela ufunde imihlahlandlela yethu ngaphambi kokuthumela, uqinisekise ukuthi uhambisana nohlu lokuhlola futhi unikeza yonke imininingwane edingekayo kumbhalo wakho wesandla.
Ngemuva kokuhambisa ukuqopha kwakho ngempumelelo, ungalindela ukuzwa emuva kithi kungakapheli izinsuku ezi-5 zomsebenzi.
Uma kwamukelwa, okuhanjiswa kwakho kuzobhalwa futhi kubhalwe izethenjwa ezifanele. Ifayela elilalelwayo / elibonakalayo lizothunyelwa ku-inthanethi ku- I -AfricaArXiv PubPub iqoqo nge-Crossref DOI futhi CC BY 4.0 Ilayisensi yokunikela .. Ifayela lombhalo lizolayishwa kwelinye lamapulatifomu abalingani be-AfricArXiv (i-OSF, iScienceOpen, noma iZenodo).
Sizofaka ukuguqulelwa komshini we-AI / umshini wombhalo kwezinye izilimi ezi-2-3 uma ukhombisa noma yikuphi kokuhanjiswa kwakho futhi ikakhulukazi uma izilimi ezithile zibalulekile ukufaka phakathi komongo wesifunda.
Uma kwenzeka kunezinkinga, imibuzo noma ukukhathazeka, i-imeyili: info@africarxiv.org
Ulwazi Futures Group & AfricArXiv	 I-23rd April 2020	 Awekho amazwana
I-PubPub, ipulatifomu yokusebenzisana evulekile yomthombo eyakhiwe yi-Knowledge Futures Group, ibambisene ne-AfricArXiv, okuyindawo yokugcina izinto yase-Afrika, ukusingathwa kweziqalo zomsindo / ezibukwayo. Lobu budlelwano…